Xaqiiqooyinka ku aadan in Ethiopia ay la baxday qunsulkeedii u fadhiyay Hargaysa • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Xaqiiqooyinka ku aadan in Ethiopia ay la baxday qunsulkeedii u fadhiyay Hargaysa
Xaqiiqooyinka ku aadan in Ethiopia ay la baxday qunsulkeedii u fadhiyay Hargaysa
November 20, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Saacadihii lasoo dhaafay waxaa warbaahinada ka howlgala geeska Afrika ay baahinayeen warar sheegaya in dowlada Ethiopia ay u yeertay qunsulkeedii u fadhiyay magaalada Hargaysa.
Wararkan oo ah kuwo si weyn saacadihii lasoo dhaafay loo lafa gurayay isla markaana sidoo kale ay tabinayeen dhankooda warbaahinada Ethiopia ayaa lagu sheegayay in Bereha Tesfey oo ahaa qunsulka ay u yeeratay dowlada Ethiopia uu isla shalay ka amba baxay magaalada Hargaysa ee caasimada Somaliland.
U yeerida qunsulka Ethiopia u fadhiyay magaalada Hargaysa ayay warbaahinada geeska Afrika ku sababeeynayeen kadib markii Ethiopia ay guud ahaan joojisay cilaaqaadkii kala dhaxeeyay Somaliland,taas badalkeena arimaha Somaliland ay kala tacaamuli doonto dowlada Soomaaliya.
Sidoo kale warbaahinadu waxa ay ku qeexayeen u yeerida qunsulka Ethiopia ee Hargaysa kadib isbedel ka hanaqaaday wadamada geeska Afrika,dowladaha Ethiopia,Eritrea iyo Soomaaliyana ay shirkoodii ugu dambeeyay ay ku yeesheen magaalada Baharadr ay ku heshiiyeen in la ilaaliyo madax banaanida wadan waliba.
Maalmao ka hor ayay ahayd markii Faysal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID ee maamulka Somaliland uu qiray in dowlada Federaalka Soomaaliya ay soo xirtay cilaaqaadkii Somaliland kala dhexeeyay dalka Ethiopia taasoo soo ifbixisay macluumaad badan oo ku aadan xiriirka maamulka Somaliland uu horey la lahaa Ethiopia iyo waxa ka run ah ee iska badalay.
Tan iyo intii uu maamulka Somaliland ku dhawaaqay in uu ka go’ay Soomaliya inteeda kale waxa uu xiriir dhow la lahaa dowlada Ethiopia inkastoo dowlada uu iminka hogaamiyo Mr.Abiy Ahmed aysan xiriir la yeelan maamulka Somaliland.
Waxyaabaha ugu waa weyn ee loo aanaynayo in uu soo afjarmo xiriirka maamulka Somalialnd uu la leeyahay dowlada Ethiopia ayaa la fahamsan yahay in uu qeyb ka yahay isbadelada ka socda Geeska Afrika ee uu hormuudka ka yahay Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed.